App Store မှာဘက်ထရီချွေတာ HD ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » ဘက်ထရီချွေတာ, HD
ဘက်ထရီချွေတာ, HD APK ကို
ဒီ app ကသင်၏ဘက်ထရီကြာကြာကြာရှည်စေသည်! အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများဘို့% ပိုဘက်ထရီသက်တမ်း 120 မှတက်ရယူပါ! ဘက်ထရီချွေတာစမတ် Pre-set ဘက်ထရီပါဝါကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Modes သာ, One-touch နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကျန်းမာတာဝန်ခံဇာတ်စင် features တွေနှင့်အတူ, ဘက်ထရီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်နှင့်သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပါ။ သငျသညျတစ်ခုတည်းခလုတ်ကို့ကလစ်နှိပ်နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ android မိုဘိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ app ကိုခံစားကြည့်ပါ !! ဘာသာစကားများကိုထောက်ခံ:
, Professional ကသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးဘာသာစကားမြားစှာထောကျပံ့, မှော် App ကိုရေးအဖွဲ့အားဖြင့်ဘက်ထရီချွေတာအသေးစိတ်ဘက်ထရီသတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်ကဖယ်ရှားရာမှာထူးခြားတဲ့အားသွင်းစနစ်ဖြင့်ကျန်းမာကောက်ခံကူညီပေးသည်, သင့် Android ဖုန်းကိုတစ်ဦးပိုရှည်ဘဝပေးသည်။ တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အာဏာကိုကယျတငျအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။
ဘက်ထရီကို Magic သင့်ရဲ့ device ကိုသင်သည်သင်၏ဘက်ထရီထဲကအများဆုံးရသေချာစေရန်တစ်ထူးခြားသောအားသွင်းစနစ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုနှင့်မတာဝန်ခံကျော်ရန်သင့်အားသတိပေးထားတဲ့အတွက်ထုံးစံထိန်းညှိ။ ဒါဟာအစစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပါဝါစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိနိုင်မ features တွေရှိပါတယ်။
- ပံ့ပိုးမှု Lollipop နှင့် 200% တိုးမြှင့်ဘက်ထရီအသက်အဘို့အညီသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုစိတ်ကြိုက်
- သင့်ဘက်ထရီကြောင်းမလိုအပ်တဲ့ app များကို Disable!
- တဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူတာဝန်များကိုဦးသေဆုံးရသော option ကို Boost!
- မျက်နှာပြင်ပိတ်ထားလျှင် apps များ Kill!
- အလုပ် / လူတန်းစား / အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးအဘို့အ Modes သာချွေတာဇယားပါဝါ!
- CPU ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု (အမြစ်တွယ်ဖုန်းများအတွက်)!
- ရိုးရှင်းသောလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု interface ကို!
ဘက်ထရီ Saver (က Android ပါဝါဆရာဝန် & မန်နေဂျာ) ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်:
★မြန်ဘက်ထရီ Saver: ခဏမှာ "Boost" ခလုတ်ကိုနှင့်အတူဘက်ထရီပြဿနာကိုရှာပြီးဖြေရှင်း။
★ရိုးရှင်းသောဘက်ထရီ Saver: ကိုအသုံးပြုခြင်းစမတ် Pre-set ကိုဘက်ထရီပါဝါကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသည် Modes သို့မဟုတ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်ကြီးသောစွမ်းအင်ချွေတာရဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပါ။
★ထိရောက်သောဘက်ထရီ Saver: သင်၏ဘက်ထရီ၏အသက်ချဲ့ထွင်ဖို့ကျန်းမာအားသွင်းနှင့်သင်၏ဘက်ထရီကာကွယ်ပါ။
★အဆင်ပြေဘက်ထရီ Saver: အဆိုပါပင်မမျက်နှာပြင် "Boost" ဝစ်ဂျက်ကိုသငျသညျဘက်ထရီသက်တမ်းမြှင့်တင်ရန်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူပါဝါစားသုံးမှုနောက်ခံ apps များရပ်တန့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
★လွယ်ကူ & အစွမ်းထက်ဘက်ထရီ Saver: အားသွင်းစရာမလိုဘဲအထိ 120% အားဖြင့်သင့်ရဲ့ Android ဘက်ထရီသက်တမ်းထပ်တိုးပါ။
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများ, မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုမှုများရှိပါက iambanish@gmail.com မှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးပါ
ကျေးဇူးတင်ပါသည် & လေးစားစွာ။
MobiMagic Apps ကပ Inc က
1 ။ 200 မြှင့်တင်ရန် Oreo & Pie OS ကိုများအတွက်သီးသန့်ဗားရှင်း% ထက်ပိုဘက်ထရီပါဝါ
2 ။ အောက်ပါအတိုင်းထောက်ခံ multi ဘာသာစကားများ:
3 ။ ကဆက်ပြောသည်ကြွယ်ဝသောအစီရင်ခံ features တွေ
4 ။ 120% ပိုမိုနှင့်ဘာဂ်အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုအပေါ်ကိုလှိမ့်ကိုစောင့်ရှောက်
5 ။ တိုင်း 5th installer ကိုတစ်ဦးအံ့အားသင့်ဆုကြေးဇူးကိုရကြလိမ့်မည်
6 ။ နောက်ဆုံးပေါ် features တွေနှင့်အတူပေါ့ပါးဗားရှင်းခံစားသိမ်းဆည်းထားပါ
4.43 ကို MB